वालिङ्ग नगरपालिकाको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ : मेयर खाँण « रिपोर्टर्स नेपाल
स्याङ्जा वालिङ्ग नगरपालिकाका मेयर दिलिपप्रताप खाँणले अविरल मुसलधारे वर्षाका कारण वालिङ नगरपालिकाको अवस्था अत्यन्तै भयावह रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नगरप्रमुख खाँणले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘अविरल मुसलधारे वर्षाको कारणले आज लगभग ४० घरमा बस्न नहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ । एउटा घर पुरिँदा त्यसमा रहेका दशजनामध्ये नौजनाको मृत्यु भएको छ । एकजना अस्पतालमा हुनुहुन्छ । अवस्था एकदमै भयानक अवस्थामा नै छ ।’ प्रस्तुत छ मेयर खाँणसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
के छ त्यहाँको अवस्था ? बाढी÷पहिरोले कति क्षति पुगेको छ ?
वालिङ्ग नगरपालिकाको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ । अविरल मुसलधारे वर्षाको कारणले आज लगभग ४० घरमा बस्न नहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई अन्यत्र सारिएको छ । एउटा घर पुरिँदा त्यसमा रहेका दशजनामध्ये नौजनाको मृत्यु भएको छ । एकजना अस्पतालमा हुनुहुन्छ । अवस्था एकदमै भयानक अवस्थामा नै छ ।
त्यो अवस्था कसरी आयो स्याङ्जामा मलाई बताउनुहोस् त ?
यो अवस्थामा आउनुमा एउटा त अविरल वर्षा नै हो । दोस्रो, हामी विकास निर्माणको नाममा जथाभावी कामहरू गरेका छौँ । जसले गर्दा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा कार्यहरू गर्दा तालमेलहरू मिलेनन् । जसको परिणाम आज हामीले भोगेका छौँ ।
तपाईँहरू कसरी त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्धार कसरी भईरहेको छ ? राहतको वितरण भएको छ कि छैन ? जनताको अवस्था के छ ?
राहतको वितरण त भएको छ तर हामी स्थानीय तहसँग बजेट पनि कम छ । बजेट अत्यन्त न्युन छ तर पनि हामी यसलाई विकास बरु पछि गरौँला, हरेक नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नु पहिलो आवश्यकता हो भनेरमा हामी लागेका छौँ । १४ ओटै वार्डहरूमा जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू र अन्य सबै स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालन हुनुभएको छ । त्यस्तै गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पनि संयुक्त रूपमा कार्यहरू भएको छ । उहाँहरूबाट धेरै ठुलो सहयोगहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।
त्यसो भए घरमाथि खनिएको ग्रामीण सडकको कारण त्यहाँ चर्केको हो, डाँडा ?
हजुर, हो ।
गतवर्ष पनि त्यही ठाउँमा पहिरो खसेको थियो नि होइन ?
पटक–पटक खसिराखेको छ ।
त्यसो भए अब तपाईँहरूको योजना के छ ? मलाई बताउनुहोस् ।
हाम्रो योजना त सडक विभागले हामीसँग, यो स्थानीय सरकारसँग तालमेल गरोस् । त्यहाँ खास गरेर वातावरणीय सुरक्षाहरू होस् । बस्तीहरूको सुरक्षा होस् । सँगसँगै मिलेर काम गरौँ । उहाँहरूको बजेट कति छ ? नपुगे हामी नगरपालिकाले पनि केही मिसाउने कि ? ती कुराहरूको बारेमा सँगसँगै काम हुँदै जाओस् भनियो यो पाँच वर्ष अगाडिदेखि सडक विभागले काम गरेको छ र वालिङ्ग नगरपालिकालाई कुनै सूचना पनि छैन । के कति बजेट छ ? अहिले पनि टेन्डर भएको भन्ने सुनेको छु । के मा टेन्डर भएको त्यो पनि थाहा छैन । त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरू प्रदेश र केन्द्र सरकारले, स्थानीय सरकारले जुन विकास निर्माणका कामहरू छन्, यो एकआपसमा मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई द¥हो पाठ सिकाएको छ । यसले झापड पनि हानेको छ । वास्तवमा यस्ता कुराहरूमा हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । हाम्रा गल्तीहरू, कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्ने र त्यसलाई समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ । त्यसो हुनाले हामीले गरेका गल्तीहरूले भोलि बास उठ्न नपरोस् । हाम्रो नगरपालिका, नगरपालिका मात्र नभएर देशमै यस्ता परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन् जसले गर्दाखेरि कुरूप बनाउँदैछ, मान्छेको घाटाको कारण बन्दैछ विकास । त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा एकदम समझको रूपमा सडकहरू खन्दा प्राविधिक, वातावरणविदहरूको राय लिएर सडकहरू खन्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । अहिले मनपरी तरिकाले जुन खनिएका छन्, यिनीहरूलाई अब बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पाठ सिकाएको छ । file photo
‘गोप्य रुपमा भेट्ने, खुसामत गर्ने र षड्यन्त्रकारी योजनाहरुमा सामेल हुनेहरुले प्रधानमन्त्रीसँग रअ प्रमुखले गरेको शिष्टाचार भेटलाई प्रोटोकल नमिलेको भन्न सुहाउँदैन्’ : सूर्य थापा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भारतीय गुप्चर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले
‘रअ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री राति लम्पसार पर्ने भनेको त नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै लज्जाजनक र असह्य कुरा भयो’ : उपाध्याय
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिपकुमार
‘नबुझेको मान्छेहरुले मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको भारतसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर प्रचार गर्छन्’ : विष्णु रिजाल
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विदेश विभागका उप-प्रमुख विष्णु रिजालले भारतीय गुप्तचर संस्था
‘सरकार असफल भैसकेको छ, सरकार छ भन्ने कुरा जनताले अनुभुति गरेका छैनन् ’ : लेखक
काठमाडौं, ६ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले
कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुन्छ, अवस्था खराब आउँदैछ संयमित बनौं : डा. पाण्डे
काठमाडौं, ६ कार्तिक । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले सरकारले कोरोना